Politika Fiarovana fiainan'olona " Journey-Assist
Ny adiresy tranokalanay: https://journey-assist.com... Ity tranonkala politika ity dia mihatra amin'ny tranonkala ihany https://journey-assist.com ary tsy mihatra amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo azon'ilay mpampiasa manindry ireo rohy azo alaina amin'ilay tranokala https://journey-assist.com . Amin'ny tranokala toy izany, ny mpampiasa dia mety manangona na mangataka fampahalalana manokana, ary hetsika hafa tsy mifandray amin'ny asan'ny tranonkala. https://journey-assist.com Ny tranonkala dia tsy manamarina ny maha-azo itokiana ny mombamomba ny tena manokana nomen'ny mpampiasa ary tsy manara-maso ny fahaiza-manaon'izy ireo ara-dalàna, na izany aza, ny fiheverana fa ny mpampiasa dia manome fampahalalana manokana azo antoka sy ampy momba ireo olana atolotra amin'ny volan'ity loharanon-karena ity ary mitazona izany fampahalalana izany hatramin'izao.
Inona avy ireo angona manokana nokarohintsika ary noho ny antony inona
Ny tranokala ihany no manangona sy mitahiry ireo angon-drakitra manokana izay ilaina amin'ny fanomezana serivisy sy / na ny fanomezana ireo soatoavina hafa ho an'ireo mpitsidika tranokala. https://journey-assist.com ... Mampiasa fampahalalana manokana an'ny mpampiasa ho an'ny tanjona manaraka ity tranokala ity:
Ny fanomezana ny serivisy sy serivisy manokana ary ny soatoavina hafa.
Fifandraisana amin'ny mpampiasa, ao anatin'izany ny fandefasana fampandrenesana, fangatahana ary fampahalalana momba ny fampiasana ny tranokala, ny fanomezana ny serivisy, ary koa ny fanodinana fangatahana sy fangatahana avy amin'ilay mpampiasa.
Fanatsarana ny kalitaon'ny tranokala, fahamorana ny fampiasana, fampandrosoana ny serivisy vaovao.
Notehirizin'ilay tranokala ny mombamomba ny mpampiasa manokana arakaraka ny fepetra anatiny momba ny serivisy manokana.Momba ny mombamomba ny mpampiasa, ny tsiambaratelo dia voatahiry, afa-tsy amin'ny tranga an-tsitrapo omen'ny mpampiasa an-tsitrapo momba ny tenany ho an'ny fidirana amina faribolana tsy manam-petra.
Naneho ny fanekeny tamin'ny hetsika toy izany ilay mpampiasa.
Ilaina ny fifindrana amin'ny maha-mpampiasa ny tranokala anao https://journey-assist.com , na manome serivisy sy / na serivisy amin'ilay mpampiasa.
Ny famindrana dia omen'ny lalàna azo ampiharina ho ampahany amin'ny fomba fanaovan-dalàna napetraka.
Mba hiantohana ny fiarovana ny zony sy ny tombontsoa ara-dalàna amin'ny tranokala https://journey-assist.com na fety fahatelo amin'ireo tranga manimba ny tranokala amin'ilay mpampiasa https://journey-assist.com .
Rehefa mametraka hevitra ao amin'ilay tranonkala ny mpitsidika dia manangona ny angon-drakitra aseho amin'ny endrika fanehoan-kevitra izahay, ary koa ny adiresy IP an'ny mpitsidika sy ny tadin'ny solontenan'ny mpampiasa navigateur hanampiana ny fahitana spam Tady tsy fantatra anarana namboarina avy amin'ny adiresy mailakao ("hash") no azo omena ny serivisy Gravatar hamantarana raha mampiasa azy ianao. Hita eto ny politika momba ny tsiambaratelo Gravatar: https://automattic.com/privacy/. Raha vao ekena ny hevitrao dia ho hitan'ny besinimaro eo amin'ny sehatry ny hevitrao ny sarinao.
Raha mpampiasa voasoratra anarana ianao ary mampakatra sary ao amin'ilay tranonkala, dia tokony tsy tokony hampiakatra sary ianao miaraka amin'ny EXIF ​​metadata, satria mety ahitana ny angona GPS toerana misy anao. Ireo mpitsidika dia afaka manaisotra izany vaovao izany amin'ny alàlan'ny famoahana sary avy amin'ilay tranokala.
Raha mamela hevitra ao amin'ny tranokalanay ianao, dia azonao atao ny mamela ny cookies hitahiry ny anaranao, ny adiresy mailaka ary ny tranonkalanao. Atao hahasoa anao ity, mba tsy hamenoana indray ny angon-drakitra rehefa manome hevitra indray ianao. Ireo cookies ireo dia tehirizina mandritra ny herintaona. Raha manana kaonty amin'ny tranokala ianao ary miditra ao anatiny dia hametraka cookie tsy maharitra izahay hamantarana raha manohana cookies ny browser-nao, tsy misy mombamomba anao manokana ilay cookie ary voafafa ianao rehefa manidy ny browser-nao. Rehefa miditra ao amin'ny kaontinao ianao, dia nanamboatra cookies maro miaraka amin'ny antsipirian'ny fidirana sy ny fakan-tsary. Ny cookies cookies dia tehirizina mandritra ny roa andro, cookies miaraka amina sehatr'asa mandritra ny herintaona. Raha misafidy ny safidy "Tadidio aho" dia ho voatahiry mandritra ny tapa-bolana ny fampidiranao. Rehefa mivoaka ao amin'ny kaontinao ianao dia hofafana ireo cookies mivoaka. Rehefa manova na mamoaka lahatsoratra ao anaty tranokala ianao dia hisy cookie fanampiny hotehirizina, tsy misy data manokana ary tsy misy afa-tsy ny ID an'ilay fidirana nasianao fanovana, dia tapitra afaka 1 andro.
Ny votoatin'ny tranonkala hafa
Ny lahatsoratra ato amin'ity tranonkala ity dia mety misy atiny voafantina (toy ny horonan-tsary, sary, lahatsoratra sns.), Ny atiny toy izany dia mitovy amin'ny fomba nitondran'ny mpitsidika ny tranokala hafa. Ireo tranonkala ireo dia mety manangona angon-drakitra momba anao, mampiasa cookies, mampihatra ny fanarahan-dia avy amin'ny antoko fahatelo, ary manara-maso ny fifandraisanao amin'ny atiny tafiditra, ao anatin'izany ny fanarahan-dia ny fifandraisana raha manana kaonty ianao ary tafiditra ao amin'io tranonkala io.
Hafiriana no andrasantsika ny angon-drakitrao
Raha mamela hevitra ianao dia hotazonina mandritra ny fotoana tsy voafetra ilay hevitra ary ny metadata azy. Atao izany mba hahitanao sy hankatoavana ireo fanaraha-maso fanaraha-maso ho azy fa tsy apetraka amin'ny filaharana fankatoavana. Ho an'ireo mpampiasa misoratra anarana amin'ny tranokalanay, dia mitahiry ny mombamomba anay manokana izay asehon'izy ireo ao amin'ny mombamomba azy ireo izahay. Ny mpampiasa rehetra dia afaka mahita, manova, na mamafa ny mombamomba azy ireo amin'ny fotoana rehetra (afa-tsy ny solon'anaran'izy ireo). Afaka mahita sy manova ity fampahalalana ity koa ny fitantanana ny tranokala.
Inona avy ireo zo anananao?
Raha manana kaonty ao amin'ny tranokala ianao na raha nandao fanehoan-kevitra ianao, dia azonao atao ny mangataka tahiry fanontana ho an'ny data manokana izay novonjena anao, anisan'izany ny angona nomenao. Azonao atao ihany koa ny mangataka ny fanesorana ireo angon-drakitra ireo, tsy misy ny angon-drakitra izay takiana hitehirizana tanjona ara-panjakana, araka ny lalàna na ho an'ny fepetra fiarovana.
Ny fanehoan-kevitr'ireo mpampiasa dia afaka manara-maso ny tolotra finday spam-automatika
Ny fomba iarovantsika ny data-nao
Ny tranonkala dia mandray ny fepetra fandaminana sy ara-teknika ilaina sy ampy mba hiarovana ny mombamomba ny mpampiasa manokana tsy hiditra amin'ny fomba tsy ara-dalàna na tsy nahy, fanimbana, fanovana, fanakanana, fandikana, fizarana, ary koa amin'ireo hetsika tsy ara-dalàna ataon'ny antoko fahatelo miaraka aminy. Ny fanovana ny politika momba ny fiainana manokana Manan-jo hanova an'ity politika manokana ity ny tranokala. Rehefa manao fanovana amin'ny fanontana ankehitriny, dia aseho ny datin'ny fanavaozana farany. Ny kinova vaovao momba ny Politika dia manan-kery manomboka amin'ny fotoana nametrahana azy, raha tsy hoe nomen'ny kinova vaovao an'ny Politika. Ny fanontana ankehitriny dia eo amin'ny pejy hatrany amin'ny: https://journey-assist.com/privacy-policy/ Famerenana tamin'ny 11.06.2019/XNUMX/XNUMX